Non Stop အမည်ရှိ သီချင်းခွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပရိသတ်တွေရဲ. အားပေးခြင်းကို ပိုမိုရရှိခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ | Buzzy
Non Stop အမည်ရှိ သီချင်းခွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပရိသတ်တွေရဲ. အားပေးခြင်းကို ပိုမိုရရှိခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
ဒီခွေဟာ မထွက်ခင် နမူနာကတည်းက နာမည်ကြီးနေတာပါ
နန်းခင်ဇေယျာတစ်ယောက် Non Stop DVD ထွက်၇ှိလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူမကို ပရိသတ်တွေက ပိုမိုအားပေးလာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီခွေ စီဒီအဖြစ်ထွက်ရှိစဉ်က လူသိပ်သတိမထားမိပေမယ့် ဒီဗီဒီထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ စိတ်ဝင်တစား အားပေးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နနျးခငျဇယြောတဈယောကျ Non Stop DVD ထှကျရှိလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ သူမကို ပရိသတျတှကေ ပိုမိုအားပေးလာကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီခှေ စီဒီအဖွဈထှကျရှိစဉျက လူသိပျသတိမထားမိပမေယျ့ ဒီဗီဒီထှကျပွီးနောကျပိုငျးမှာ သိသိသာသာ စိတျဝငျတစား အားပေးလာတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ခွေတွေဝယ်ယူဖို့ ထပ်ပြီး အော်ဒါတွေလည်း ရနေသလို ခွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်း ပိုမိုလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခှတှေဝေယျယူဖို့ ထပျပွီး အျောဒါတှလေညျး ရနသေလို ခှထှေကျပွီးနောကျပိုငျး ဖြျောဖွပှေဲတှလေညျး ပိုမိုလကျခံရရှိထားတယျလို့ သိရပါတယျ။